စော်ရှာနေတဲ့ ညီလေးတွေသိဖို့ – Achit University
ပိုက်ဆံမရှိပေမယ့် တကယ်သန့်သန့်ပြန့်ပြန့်စော်လေးတွေfbသုံးတဲ့အခါ….tik tokလိုဟာလေးတွေဆော့တယ်။…ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးpostလေးတွေတင်တယ်။သူတို့က..အခုမှonlineဆိုတာကြီးကိုလက်တည့်စမ်းခွင့်ရတာကိုး။ ……
ပိုက်ဆံရှိတဲ့မိဘတွေက..သူတို့သားသမီးကိုမတော်တရော်နဲ့တွေ့သွားမှာဆိုးတော့…အမြဲcheckနေတာ….။ …ပိုက်စံရှိတယ်…ရူပါမသန့်တဲ့စော်တွေက…အစားအသောက်ပုံတွေတင်တယ်။….သူတို့ကနည်းနည်းfeelတယ်…မျက်နှာပုံသိပ်မတင်ဘူး။ စကားပြောယဉ်ကျေးတယ်။ …
အေး..ပိုက်စံလည်းမရှိဘူး..စောက်ခွက်ကလည်း..ဒစ်လည်နေတဲ့ဖေလိုးမတွေကျတော့…ဘာလုပ်သိလား…. ဖာသယ်မကြီးလိုဈေးဗန်းတွေခင်းမယ်။ ချီးပါတာကအစဓာတ်ပုံရိုက်တင်မယ်… အချိန်ပြည့်feelမယ်။ သူလ်ုဘဝတူ…ဖေလိုးမလေးတွေနဲ့…တရုန်းရုန်း… စပတွေ..လီးတွေ…ပါးစပ်ကမချဘူး… Online shopလုပ်မယ်။
(တကယ်စီးပွားရှာနေတဲ့သူကိုမဆိုလိုပါ) Online shopလုပ်သလိုလို…online shopကပဲသူ့ကိုလုပ်သလိုလိုနဲ့…ဘာမှစောက်ဖြစ်မရှိ…ဘာမှလည်းအမြတ်မကျန်… မင်းသားပုံတွေshareမယ်…ကုတင်ပေါ်ကအကြောင်းတွေကို…ရေးပြမယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်တင်ရင်…နောက်ကထရံတွေကို…bluerနဲ့ဝါးပီးတင်မယ်။ စတေကာတွေအုပ်မယ်။…မျက်နှာကိုဟိုခြစ်ဒီခြစ်ပုံတွေတင်မယ်။ ….
သူဖတ်သလိုလိုနဲ့တင်မယ်။…. …သရဲကားတွေရုံတင်တိုင်း….လင်မရှိတာကို…အဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းpostတင်shareမယ်။ ……
တစ်နေ့ကို..ဘယ်ကဆိုက်ကားသမားကိုလွမ်းလို့လွမ်းမှန်းမသိတဲ့postတွေ..ထိုင်တင်မယ်။ …စောက်လုပ်ကမရှိဘူး။စောက်ကိုင်ကမရှိဘူး။စောက်ခွက်ကဒစ်ရုပ်။ ဖင်ကရှူးရှူး…နို့ကပြဲပြဲ..စောက်ဖုတ်ကရွဲပြဲ…အဲ့ဖေလိုးမတွေကလွဲရင်ကျန်တဲ့စော်အကုန်ကောင်းတယ်..ညီလေးတို့။
Crd – Thu Rain Win Aye
Previous ဆရာဝန်ကြီးတောင် အံ့သြမှင်သက် သွားရတဲ့ အရူးရေး တဲ့ စာအုပ်….ဖတ်ကြည့်ကြရအောင်
Next ကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်မယ်ဆိုပြီး တူတောင်ဖမ်းလို့မမိတဲ့ Thor ရဲ့ video လေး
ခရီးသည်နဲ့ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားတို့ မမျှော်လင့်ဘဲ ရုပ်တူနေတဲ့ အဖြစ်အပျက်(ရုပ်သံ)
ကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်မယ်ဆိုပြီး တူတောင်ဖမ်းလို့မမိတဲ့ Thor ရဲ့ video လေး
ဆရာဝန်ကြီးတောင် အံ့သြမှင်သက် သွားရတဲ့ အရူးရေး တဲ့ စာအုပ်….ဖတ်ကြည့်ကြရအောင်
Total visitors : 57,495
Total page view: 99,691